Vydia: Maamul Tusmadaada Fiidiyowga iyo Xuquuqda Dijital ah | Martech Zone
Vydia: Maamul Tusmadaada Fiidiyowga iyo Xuquuqda Dijital ah
Isniin, February 19, 2018 Axad, Febraayo 18, 2018 Douglas Karr
Vydia waa Inc 500 shirkad tiknoolajiyad fiidiyoow ah oo awood u siinaysa abuurayaasha inay si fudud u maareeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo xuquuqdooda dhijitaalka ah iyagoo adeegsanaya hal barxad dhexe.
Abuureyaasha maaddooyinka ayaa ka faa'iideysanaya awoodda fiidiyowga dhammaan barnaamij kasta oo bulsho oo la heli karo, hase yeeshe, aragtiyadooda iyo xakamaynta hantidooda aqooneed ayaa xadidan. Vydia waxay awood siineysaa abuureyaasha iyadoo lagu xallinayo dhibaatadan iyadoo la adeegsanayo codsi caqli badan, oo caalami ah. Roy LaManna, Aasaasaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda Vydia
Astaamaha Hay'adda Vydia Waxaa ku jira awoodda lagu:
Casuum Hal abuureyaasha - U dir e-mayl dusha kaabayaashaaga dusha dusha ka dibna u deji boqolkiiba loo qoondeeyay dakhliga kala-baxa.
Daabac si aad u xulato meelaha loo socdo - U dir waxyaabaha abuuraha maadooyinka isku xidhan isla markiiba ama jadwalka waqtiga iyo maalinta.
Deji Siyaasaddaada - Xullo inaad Oggolaato, Joojiso ama Lacag u sameyso fiidiyeyaasha abuureyaasha waxay kuxirantahay hadafyadaada istiraatiijiyadeed ee fiidiyowga ah.
Xisaabinta tooska ah - Dakhliga waxaa si otomaatig ah loogu qaybiyaa dadka qaata ee ku habboon. Si fudud ula soco dhamaan ilaha dakhliga isla markaana cadee kuwa ugu sareeya.
La soco dakhliga iyo waxqabadka - Falanqaynta dhammaan abuurayaasha, fiidiyowyadooda iyo sheegashada UGC, dhammaan barnaamijyada waxaa laga heli karaa hal dashboard dhammaystiran.
Waxaa ka faa'iideystay in ka badan 180,000 oo fannaaniin, saameyn ku leh, iyo sumcadaha adduunka oo idil, barnaamijka Vydia wuxuu soo bandhigayaa adeegyo lacag-soo-saar iyo qaybinta ah oo si fudud ugu habboon abuureyaasha labada barnaamijyo desktop iyo moobiil. Vydia waa lamaane qiimo sare leh daabacayaasha waaweyn ee dhijitaalka ah sida Vevo, Youtube, Facebook iyo Dailymotion iyo sidoo kale shabakadaha sida BET, MTV, iyo Music Choice.
Tags: Fiidiyowyada Suuqgeyntafiidiyowga warbaahinta bulshadauGCwaxyaabaha ka kooban isticmaaleabuurista videoabuurayayaasha fiidiyowgaMuuqaal fiidiyoow ahsiyaasadda fiidiyowgadaabacaadda fiidiyowgavydia
CloudCherry: Madal Dhamaystiran oo loogu talagalay Khariidaynta Safarada Macaamiisha
SOCXO: Suuqgeynta U-doodista ee Qiime Ku-saleysan Waxqabad